China KZJ Series Ngosipụta Ngwaahịa na ndị na-eweta ngwaahịa | KAIQUAN
KZJ usoro slurry nfuli, otu-ogbo kwụ-ụdị centrifugal slurry nfuli, bụ ọhụrụ-ụdị eyi & corrosion eguzogide slurry nfuli mepụtara anyị Shijiazhuang ụlọ ọrụ. Na ina slurry nfuli na-abawanye na ike eletrik, nkà mmụta banyere ígwè, nkà na ụzụ, ihe owuwu ụlọ.
KZJ usoro slurry nfuli, otu-ogbo kwụ-ụdị centrifugal slurry nfuli, bụ ọhụrụ-ụdị eyi & corrosion eguzogide slurry nfuli mepụtara anyị Shijiazhuang ụlọ ọrụ. Site n'inwe nfuli slurry na-abawanye na ike eletrik, metallurgy, chemical engineering, ihe owuwu ụlọ, na ụlọ ọrụ ndị ọzọ dị mkpa, mgbapụta nke mgbagwoju anya na kpọmkwem ọrụ ọnọdụ nke ngwa mepụtara. Companylọ ọrụ ahụ nwetara uru dị elu teknụzụ na rụzuru n'ụlọ na mba ọzọ mgbe ị na-emepụta hydraulic ụdị na usoro na ịhọrọ ihe na-eguzogide ọgwụ maka usoro nfuli a.
Na mgbakwunye, Kaiquan agbakwunyela ihe ohuru nke ya imewe atụmatụ a usoro. The nfuli nwere uru nke ịdị elu ịrụ ọrụ nke ọma, jiri ume dị ike ịzọpụta ikike, nta vibration, mkpọtụ dị ala, ọrụ a pụrụ ịdabere na ya, ogologo ndụ ọrụ na mfe mmezi. Nfuli ' arụmọrụ ruru ụlọ na-eduga n'ọkwa, na arụmọrụ ndeksi nke ọtụtụ nfuli esịmde mba dị elu larịị. Nkọwapụta nke ngwaahịa a na-agbanwe agbanwe na Kpụrụ JB / T8096-1998 maka nfuli nke slrifry Centrifugal.
Nke gara aga: WQ / YT Integrated Prefabricated Pump Station Product Ngosi
Osote: KZJXL Series Submerged slurry nfuli
XBD-DP Series Firefighting mgbapụta